Tue, Mar 26, 2019 | 05:40:18 NST
का‌ठमाडाैं, फागुन २४ - नेपालमा हाँस्य कलाकारको लोकप्रियता र कमाई लोभ लाग्दो छ । टेलिश्रृंखलामार्फत जन्मिएका हाँस्य कलाकारको पछिल्लो समय ठूलो पर्दामा समेत प्रभाव बढ्दो छ । यसरी लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका कलाकार कोही उपनामका कारण चिनिएका छन् त कोही थेगोसँगै हिट भएका छन् । जितु नेपाल, सिताराम कट्टेल, कुञ्जना घिमिरे, केदार घिमिरे, विल्सन विक्रम राईलगायतका हाँस्य कलाकारलाई उपनामले बढी चिनिन्छ । उनीहरुले सिरियलमा बोल्ने थेगो हिट भएतापनि उपनामले नै उनीहरु दर्शकको मनमा बस्न सफल भएका छन् ।
किरण के.सी–‘राता मकै’
धेरैले किरण के.सी भन्नुभन्दा पनि ‘राता मकै’ भन्न सजिलो लाग्छ भन्नुहुन्छ । दर्शकहरु सबैले मन पराइदिनु भयो । त्यसकै प्रतिफल अहिले ‘राता मकै’ चोक बनेको छ । ‘राता मकै’ मार्ग बनेको छ । र, ‘राता मकै’ मासु पसल बनेको छ । ‘राता मकै’ पान पसल बन्यो । गाडीहरुमा पनि ‘राता मकै’ भनेर लेखिन थाल्यो । ‘राता मकै’ एल्बम बन्यो । यो सब देख्दा सुन्दा अहिले ज्यादै खुशी लाग्छ । मलाई भेट्दा धेरैले किरण के.सी भन्दा पनि ‘राता मकै’ भनेर नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यतिबेला जितु भाईले यो थेगो दिँदा यति धेरै भाइरल बन्छ भन्ने सोचेको थिईन ।
अनि मैले दोस्रो भागमा भने कतै पनि त्यो बोलेको थिइन । एकदिन त्रिपुरेश्वरमा हिँडिरहेको थिएँ । एक जना मान्छेले बोलाएर तपाईंहरुको नयाँ कार्यक्रम सुरु भएको रहेछ, ल बधाई छ । तर, तपार्इंले पहिलो एपिसोडमा ‘मुखाँ हान्नुजस्तो’ भन्नुभएको थियो दोस्रो एपिसोडमा भन्नु भएन । त्यो भनेको राम्रो भएको थियो भन्नुभयो । अनि ए ! यो थेगो त राम्रो हुन्छ कि के हो ? भनेर तेस्रो एपिसोडबाट भन्न थालेको । ९, १० एपिसोड नपुग्दै त हिट भैहाल्यो ।
यसको श्रेय कलाकार उज्वल भण्डारीलाई जान्छ । ‘मेरी बास्सै’ गर्ने बेलामा एउटा थेगो बोल्नु पर्यो भनेर सोध्दा केही पनि थेगो पाइएन । त्यसपछि सुटिङ सुरु भैसकेको थियो । मैले उज्वललाई थेगोका लागि फोन गरेँ । उसले पनि कहाँ भन्ने वित्तिकै थेगो पाइन्छ त । म त यतिबेला झ्यालबाट बाहिर हेरेर बसिरहेको छु । बाहिर मुला बारी छ । मुला साग भन्देउ हिट हुन्छ भन्यो । लौ त ! भनेर ‘मुला साग’ भनेको त्यत्तिकै हिट भयो ।
अहिले अब सुरेन्द्र के.सी भन्दा पनि मुला साग भनेर चिन्ने धेरै छन् । बाटो हिँड्दा पनि मुलाको साग भन्नुहुन्छ खुशी लाग्छ । मेरो दुईवटा नाम भएछ भनेर । अरु सिरियलहरु मार्फत पनि सुरेन्द्र केसी भनेर त छाइसकेको थिएँ । तर ‘मुला साग’ भन्ने थेगोले मलाई सर्वत्र चिनाइदियोे ।
‘जिरे खुर्सानी’ मा सुरुमा गाउँबाट म आमासँग काठमाडाैं आएको हुन्छु । मेरो आमाको भूमिकामा सविता गुरुङ दिदी हुनुहुन्थ्यो । अनि बुवाको भूमिकामा शिवहरी पौडेल दाई । शिवहरी दाईले शहरमा पनि विवाह गरेर अर्को आमा लुकाएर राख्नु भएको हुन्छ । अनि हामी चाहीँ गाउँमै हुन्छौँ र एक दिन शहर आउँछौँ ।